ထားသော TEMPURA ငါး
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> Frozen ထားသော TEMPURA -> ထားသော TEMPURA ငါး
Champion Refrigerant Food Co., Ltd. အရည်အသွေးမြင့်မားန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ၎င်း၏အလျှော့နှင့်စံကိုထုတ်လုပ်လိုင်းများဖောက်သည်များအစားအစာဘေးကင်းများအတွက်စည်းမျဉ်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်ကူညီပေးခဲ့, နှင့်ထိထိရောက်ရောက်အသီးအနှံထုတ်ကုန်များကူညီပေးခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Keelung ထားသော TEMPURA ငါး ကျေးဇူးပြုပြီးထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးအောက်မှထုတ်လုပ်နှင့်သင်စိတ်ဝင်စားကြလျှင်ဖြစ်ပါတယ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ။ # အရည်အသွေးမြင့်ပူပြင်းတဲ့အိုးတလုံးစားနပ်ရိက္ခာဆန်တင်ပို့သူများ # Taiwan အေးစက်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်သူ # ထိုင်ဝမ်အေးစက်နေတဲ့ပူပြင်းတဲ့အိုးတလုံးကိုအစားအစာကိုပေးသွင်း
ထိုင်ဝမ်အတွက်ရေပန်းအစားဆုံးအစားအစာ၏တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကထုတ်လုပ်သူဒီထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အရည်အသွေးမြင့်မားနှင့်တသားတကျတှေ့ဖို့ရှားပါးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ကြမ်းပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်. အလေးအနက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါတို့သည်ငါတို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်မကိုက်ညီသောထှကျဖြစ်စဉ်၏မာနထောင်လွှားဖြစ်ကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပူးပေါင်း. အဘို့သင့်ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုကိုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ကြ၏။ # ထိုင်ဝမ် OEM အေးစက်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာစက်ရုံတွင် # ကျနော်တို့ပူပြင်းတဲ့အိုးကစားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာ # ကျွန်တော်တို့ဟာ "အရည်အသွေးမြင့်မား၏ထိုင်ဝမ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းများမှာ